Netanyahu wuxuu ugu yeeray Erdogan "beenaale" – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Netanyahu wuxuu ugu yeeray Erdogan “beenaale”
Raiisel wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa Talaadadii ku dhaleeceeyay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu yahay “beenaale” ka dib khudbad muran badan dhaliyay oo uu la hadlay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Netanyahu wuxuu yidhi: “Erdogan waa kan sii sheega beenta ku saabsan Israel, oo dila kurdiyiinta dalkiisa, oo dafiraya dambiyada xunxun ee ka dhanka ah Armenia – qofkani waa inuusan u wacdin Israel,” sida lagu daabacay jariidada Jerusalem Post.
Erdogan, khudbaddiisa kalfadhiga 74-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, wuxuu si adag u dhaleeceeyey Israa’iil, isaga oo yiri: “Dhulka Falastiin ee ay Israel qabsatay waa mid ka mid ah meelaha ugu xaqdaran adduunka.”
Erdogan wuxuu dhalleeceeyay aamusnaanta bulshada caalamka ee ku aaddan dilkii haweeney reer Falastiin ah oo ay dileen ciidamada amniga Israel aragtidooda buuxda ee adduunka.
Wuxuu tilmaamay in dowladda Israel ee hadda jirta ay ku kacayso falalkeeda dambiyadaas, ku soo rogeyso xayiraad bini’aadannimo ka dhan ah marinka Qaza, howlaha sharci dejinta iyo bedelida xaaladda taariikheed iyo tan sharciga ah ee Qudus ma joogsaneyso ku xadgudubka sharciga caalamiga ah, laakiin wuxuu dhaafaa inuu ku tunto dhammaan qiyamka aadanaha.
Previous articleDowlad Asian Ah oo Shuruuc Cusub Ka Soo Saartay Xafladaha Arooska
Next articleNetanyahu calls Erdogan a “liar”